Nhau - 3 Lipsticks Iyo Yakanyanya Kukodzera Zhizha, Runako Ruri Kuchema!
3 Lipsticks Iyo Yakanyanya Kukodzera Kune Zhizha, Runako Ruri Kuchema!
Zvakasiyana ne "zvinorema" kunzwa kwekuvhuvhu uye nguva yechando, zhizha rinenge "rinozorodza" kubvisa, uye kugadzirwa kuri zvakare tsika yekureruka uye kujekesa.
Asi kunyangwe zviitwike sei, kushandisa miromo inoramba iri nhanho yakakosha kuvanhu vazhinji.
Muzhizha, vanhu vanosarudza mamwe "akajeka uye ane hupenyu" mavara kune akapfuma mavara.
Saka nhasi ini ndichakupa Amway mazana mashoma ema Yuan miromo inokodzera zhizha.
Vanhu chaivo vane toni dzeganda dzakasiyana vakarongedzwa pamwechete, ikozvino ~ ndinokushuvirai mose kufara kudyara hhhhhhhh
Sarudza Izvi ZveZhizha Lipstick
Mirror mvura gloss muromo glaze
Muonde wemuonde ndewe mukurumbira unozivikanwa mumakore maviri apfuura, kupenya kwemavara hakuna kunyanya kukwirira, hapana pfungwa ye fluorescence, inokodzera kwazvo zhizha!
Ichi ipfuma yemutengo wemaonde wakachipa. Jasi rakatetepa rine zvipoda zvisina kujeka uye mameji akareruka anogona kusimudzira huso hwako. Izwi rakatsvuka rejasi gobvu rinenge rave pachena. Chandinotaura ndechekuti ine inotonhorera uye yakanaka kunzwa.
Kunyangwe ichinzi girazi remvura gloss lip glaze, muchokwadi girazi kunzwa harina kunyanya kukwirira, rinozoita firimu. Iyo yekunyorovesa degree ichakanaka, uye hakuzove nekusaenzana kunyorera mukutarisana nematambudziko madiki senge yakaoma mitsara uye peeling.
Simba rekugara rakanaka. Chaizvoizvo, zvinogona kuitwa pasina kunamatira mukombe, asi dambudziko rakajairika rinomuka, rinova rinosvibisa miromo. Ini pachezvangu ndakaiyedza kanoverengeka. Ichokwadi, hazvisi nyore kuburitsa. Vanopa vanoitira hanya nezve izvi vanofanirwa kungwarira mukudyara mahebhu!
Pachiso chaBaipi, uyu akangwara uye anoyevedza. Muchidimbu, haugone kukanganisa nemeso ako akavharwa.
Pachiso cheyero, kunyange chisina kusimudzwa sechiso chena, ichi chakaderera-kiyi uye chinonakidza kunzwa zvakare chinonakidza kwazvo!
Heroine's isina kujeka miromo miromo uye dama mbiri-shandisa miromo kubwinya
Uyu muromo wemuromo wakakurumbira kwazvo izvozvi, mutengo wacho hauna kukwirira, pendi yemavara yakanaka, uye pese panoburitswa ruvara rutsva, ndinogona kuribhadharira.
Iyo tsvuku plum bhinzi ruvara rutsva rwakaburitswa imwe nguva yapfuura. Iyo inopenya kwazvo bhinzi yekuisa pendi nekadiki toni toni mukati. Zvinenge zvanyanya kujekesa kana yakaputirwa zvakapetwa, uye iro grey toni rinorema kana rakaputirwa. Pachave nerudzi rwemuromo. Iko kunzwa kwemhute.
Kufanana neyekutanga muromo kubwinya, iko kwemuromo wemuromo kwakanyanya kwazvo. Kana iwe uchinge waisa pamuromo, pachave nekunanzva kunzwa, uye iyo miromo mitsara ichave yakatsetseka-yakatarisa mune imwe sekondi.
Simba rekugara harina kushata, rinoshatisa kapu zvishoma, iri mukati meyakagamuchirwa nzvimbo.
Muvara uyu hauna kusarudzika zvachose, kunyangwe iine mamwe maruva manotsi mairi, ichiri inoshamwaridzika kune yero ganda. Uye iyo yekuviga simba simba iri zvakare yakanaka kwazvo, iwo ruvara rwemuromo iwo wega haukanganise zvakanyanya.
Chiedza mvura yakajeka miromo glaze
Isu takurudzira ino inozivikanwa inozivikanwa yemukati mutambo akateedzana muromo glaze kanoverengeka zvisati zvaitika, senge: kunyemwerera kusiri-mafuta, matatu-poindi kunonoka, kusvetuka kwakajairika uye mamwe manhamba erudzi, uye ikozvino ini ndinowanzoapfeka muhombodo yangu yekuzora.
Kutaura chokwadi, iwo mavara eruvara akateedzana aya akanyanyisa kunaka pamazita! Iyi #PinkSleepwalk iruvara rutsva rwekurara masikati. Ndakaifarira pakutanga kuona. Iyo apricot tii pinki kara haina hukasha, pamwe chete neyakajeka girazi, ine kuravira kwezhizha!
Ndingakurudzira kupfeka kwakakora kana kuputira kweiyi, nekuti kana yakaputirwa zvakapetwa, pamusoro pekuita kuti muromo uratidze kuva nemvura, ruvara runogona kusurukirwa.
Iwo mamiro acho akafanana nemuromo kubwinya, asi haisi iyo inonamira. Mushure mekuishandisa, firimu rakapfava rinogadzirwa mushure mechinguva, riine girazi rakanaka-senge kunzwa.
Asi ini ndinofunga poindi yekuishandisa ndeye kuisazve, nekuti simba risingaperi rakajairika, zviri nyore kufamba, uye rinogona kukwidziridzwa muzvishoma uye kakawanda, uye majasi makobvu haazoite kuti miromo inzwe kushoshoma.
Uyu haatore toni yeganda, asi zvinokanganisika zviri nyore nemuvara wemuromo iwo wega.
Kana muromo wako wega uine rima, unogona kuve unojeka muromo kubwinya nawo, ingo shandisa iwo kuisa matte lipstick, inova zvakare sarudzo yakanaka.
Post nguva: Jun-22-2021
eyeliner, lipgloss, mink lashes, Ziso Lashes, Vatengesi ve Eyelash, Eyelash Kuwedzeredzwa,